Ama-Proteas anethuba lokuqopha umlando kwi-T20I yokugcina
Ama-Standard Bank Proteas anethuba lokuthola indawo yabo emlandweni uma benqoba umdlalo wesibili we-KFC T20 International bedlala ne-Bangladesh e-Senwes Park e-Potchefstroom ngeSonto. Ukunqoba kwama-Proteas kuzobanika ukunqoba okwesithathu kulandelana nge-whitewash kuwona wonke ama-format kule-tour, iqembu lokuqala le-South Africa lokuthola lokhu bedlala neqembu elivakashile.
Umdlalo we-T20 International wokuqala e-Potchefstroom, futhi kuzoba i-T20 International yekhulu kwi-South Africa seluku kwaqala loluhlobo lwekhilikithi ngo-2005. Sekube nabadlali abangu-73 kusukela umdlalo wama-Proteas wokuqala bedlala ne-New Zealand e-Bidvest Wanderers Stadium ngo-2005, u-JP Duminy uhamba phambili ngama-runs angu-1696 futhi u-Dale Steyn unama-wickets amaningi angu-58.
Oshayela ama-Proteas, u-Farhaan Behardien, uthi iqembu lijwayela amacebo amasha kanye nokucabanga komqeqeshi, u-Ottis Gibson, futhi uzowudlala umdlalo ngenhloso kanye nenkululeko efana nomdlalo wokuqala ngoLwesine. U-Behardien akaphumanga enama-runs angu-36 emabholeni angu-17 njengoba benqobe ngama-runs angu-20, futhi kuvuse ukuzithemba ngendlela adlala ngayo kanye nesimo somqondo ngaphambi komdlalo wokugcina.
“Sidlalela ukunqoba yonke imidlalo,” u-Behardien ekhuluma e-Potchefstroom ngoMgqibelo. “Sifuna ukunqoba konke futhi singayiniki i-Bangladesh ithemba ngaphambi kokuthi baphindele ekhaya. Emuva kwalokhu siphindela kuma-franchise ethu silungiselele i-CSA T20 Challenge ngakho kubalulekile ukuyiqeda kahle i-season ngaphambi kokubhekana ne-India ngonyaka ozayo.”
“Umqeqeshi wethu omusha u-Ottis Gibson ulethe izinhlelo ezintsha eqenjini,” kusho u-Behardien. “Asivimbezelekile, akukho esingakwazi ukwenza, ukushaya noma ukuphosa, sibheke isibhakabhaka. Besidlala kahle kakhulu. Sinike abadlali abancane amathuba futhi kusasa elinye ithuba lokuthi baveze amakhono abo.”
Umdlalo uzoqala ngo-14h30.
Ama-Proteas aqhubeka nokunqoba edlala ne-Bangladesh Ama-Proteas ahlose ukulawula i-Bangladesh u-Frylinck ubheke ukugcina izinto zilula enkundleni enkulu u-Frylinck ubizwe kwiqembu lama-Proteas kuma-T20